၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျင်းပဖို့ အိမ်ရှင်အသင်းတွေအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သုံးနိုင်ငံ ကို ဖီဖာမှတရားဝင်ကြေညာ….. - YTV Channel
Home | Sports | ၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျင်းပဖို့ အိမ်ရှင်အသင်းတွေအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သုံးနိုင်ငံ ကို ဖီဖာမှတရားဝင်ကြေညာ…..
၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကျင်းပဖို့ အိမ်ရှင်အသင်းတွေအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သုံးနိုင်ငံ ကို ဖီဖာမှတရားဝင်ကြေညာ…..
လေးနှစ်တစ်ကြိမ် အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ…….လာမည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို အမေရိကန်၊မက္ကဆီကို နှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံတို့မှ အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်……နိုင်ငံသုံးခုလုံးမှာ ကျင်းပသွားမယ့် မြို့များကိုလည်း အတည်ပြုပေးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်….
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အတ္တလန်တာ၊ဘော်စတွန်၊ဒေါလက်စ်၊ဟော့စတွန်၊ကန့်ဆက်စ်မြို့တော်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိ့စ်၊မီယာမီ၊နယူးယောက်၊နယူးဂျာဆီ၊ဖီလာဒဲဖီးယား၊ဆန်ဖရန်စ္စစကို မြို့နှင့် ဆီတယ်မြို့တို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်…မက္ကစီကို နိုင်ငံမှ ဂူအာဒလာဂျာရား၊မွန် တာရေး နှင့် မက္ကစီကို မြို့နယ်တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်…ကနေဒါနိုင်ငံမှာကတော့ တိုရွန်တို မြို့ နှင့် ဗန်ကူးဗား မြို့ များကို ထည့်သွင်းသွားခဲ့ပါတယ်…..ဖီဖာဥက္ကဌ ဂီအာနီ အင်ဖာတီနိုကတော့ “ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ၁၆ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလား ကို အဆိုပါနိုင်ငံ တွေမှာ ကျင်းပပေးမှာကို ကောင်းမွန်စွာလက်ခံပါတယ်” ဆိုပြီးဝမ်းသာစကား ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်….
ဆက်လက်ပြီး ယနေ့ဟာ သမိုင်းဝင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ…အားလုံးအတွက်ရော မြို့နဲ့ မြို့နယ်အသီးသီးမှာ ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ရော ပေါ့ အဆိုပါသုံးနိုင်ငံပေါင်းစည်းထားတဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံး ရှိုးပွဲကြီးကို ကမ္ဘာပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတော့မှာပါလို့ ဆက်လက် ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်…ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေ…..နောက် ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာကျင်းပမယ့်ကစားပွဲတွေအတွက်ကြိုတင်ရင်ခုန်ရင်း ကမ္ဘာ့အကောင်းမွန်ဆုံးရှိုးပွဲ ကြီးကို စောင့်မျှော်အားပေးကြရအောင်ဗျာ……